macOS Big Sur 11.0.1 Musharax Hada Laheli Karo | Waxaan ka socdaa mac
macOS Big Sur 11.0.1 Musharax Hada Laheli Karo
Haddii aan tixraac ahaan u qaadanno tempos-ka uu Apple u qaaday bilowga nooca horudhaca ah ee watchOs 7.1 iyo nooca ugu dambeeya Dhamaan dhagaystayaasha, dhowr maalmood gudahood waxaan haysan doonaa nooca ugu dambeeya ee macOS Big Sur 11.0.1. Hadda iyo wixii hadda ka dambeeya, waxaan kala soo bixi karnaa noocaan oo u eg kan ugu dambeeya. Dabcan kaliya waxay ku habboon tahay horumariyeyaasha.
Apple ayaa hadda sii deysay nooca horay loo sii daayay ee loogu talagalay dhammaan dhagaystayaasha macOS Big Sur 11.01. Noocaan cusub ee nidaamka qalliinka waxaa la sii daayay seddex toddobaad ka dib markii Apple ay soo saartay MacOS 11 Big Sur beta 10 loogu talagalay horumariyeyaasha. Diiradu waxay sii wadaa inay hagaajiso cilladaha iyo hagaajinta waxqabadka nidaamka hawlgalka kahor sii deynta guud.
Waxaa sidoo kale la bilaabay 5 maalmood kahor dhacdada halka shirkadu ay tahay inay ku dhawaaqdo Macs-ka cusub Apple Silicon. Ma doonayaan guul darrooyin tanna waxaa si isa soo taraysa u caddaynaya in isla maalintaas lagu dhawaaqi doono nooca ugu dambeeya ee lagu rakibayo kombuyuutarrada cusub. Xaaladdan dhexdeeda, macOS 11.0 Big Sur waxay u badan tahay inay la socoto midka cusub. Waxaa ku xigta 11.0.1 oo ah cusbooneysiinta cilad hagaajinta.
macOS 11 Big Sur waa cusbooneysiin ballaaran oo loogu talagalay Mac, kaas oo ay kujiraan isdhexgal gabi ahaanba dib loo naqshadeeyay, barnaamij fariimo gabi ahaanba cusub ah, xarun xakameyn gebi ahaanba cusub iyo xarun ogeysiis Waxaa jira waxyaabo badan oo dheeraad ah, laakiin kuwa aan kor ku soo xusnay ayaa ka sarreeya kuwa kale.
Dhawaan waxaan arki doonaa sida ay u cusbooneysiiso cusbooneysiintan cusub. Aad ayey u xun tahay kuma tijaabin karo Mac-keygii hore. Waxaan ku qasbanahay inaan si dhab ah uga fikiro bal inaan ku iibsado moodooyinka cusub hawlwadeenada cusub ee ay balanqaadeen iyo waxyaabo badan Waxqabadka wanaagsan, nolosha batteriga oo dheer. Waxaa jira hadal ah in lagu arki doono saddex nooc oo kala duwan oo ah MacBook iyo iMac. Waxaa jiri doona doorasho. Waxaan rajeyneynaa inaanan bixinaynin qiimo sare.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » MacOS Big Sur » macOS Big Sur 11.0.1 Musharax Hada Laheli Karo
Apple waxay qorsheyneysaa inay soo saarto 2,5 milyan Apple Silicon MacBooks illaa Febraayo 2021
Sawirada AirPods 3 waxaa lagu sifeeyay naqshad aad ugu eg AirPods Pro